Jowhar.com - Somali news Leader - News: Mashruuca Afurinta Bukaanada ku jira Isbitaalada Muqdisho oo bilowday
December 06 2013 01:23:21
Mashruuca Afurinta Bukaanada ku jira Isbitaalada Muqdisho oo bilowday
Hay�adda Samafalka ee Hormuud Telecom Foundation ayaa iyadoo taageera maaliyadeed ka heleysa shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxay fuliysay mashruuc lagu afurinayo dhamaan Bukaanada ku jira Isbitaalada Danta guud ee ku yaalla Magaalada Muqdisho.
Mashruucan oo si isku mid looga fuliyey Isbitaalada ugu waaweyn Magaacalada sida Madiina, Banaadir, Keysaney & Daayniile ayaa waxaa ka faa�iideystay in kabadan 800 oo bukaan jiif ah oo qaba dhaawacyo & xanuunno kale, iyadoo qof kasta oo bukaanka kamid ah laguddoonsiiyey $100 (boqol dollar).
Maamulaha Hey�adda Hormuud Telecom Foundation C/llaahi Nuur Cismaan oo kahadlay Xaflad ay uga talo qaadanayeen Agaasimayaasha isbitaalada laga fuliyey mashruuca afurinta Bukaanada ayaa sheegay in ay Hey�addu ay ku bixineyso howshan lacag dhan 1,536,000,000 Sh.so.
Madaxa caafimaadka ee Isbitaalka Madina Drs. Duniyo Cali Maxamed oo kamid aheyd Masuuliyiintii kasoctay Isbitaalada Danta Guud ee Muqdisho ayaa tilmaantay in Shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay haatan gacata kuheyso qeybo kamid ah isbitaalka ayna dhismayaal ka dhiseen sibitaalka, waxay muujisay sida ay ugu faraxsantahay Mashruucan iyadoo uga mahad celisay Hey�adda Hormuud Telecom Foundation.
Hey�adda Hormuud Telecom Foundation ayaa wadda tallaabooyin xariir ah oo ay afurin ugu sameysayso Dadka dan yarta ah, Bukaanada & qaar kamid ah Agoonta Bisha barakeysan ee Ramadaan.
0 Comments · 1227 Reads
jowhar.com3,086,751 unique visits